कहिले काही मनमा अनेकौ कुराहरु खेलिरहेका हुन्छन , चाहिने नचाहिने सबै सोचिरहेको हुन्छ। थाहा छैन किन यति अबुझ बनिदिन्छ ,यस्तै म आफ्नै कयौ प्रस्नाहरुको उत्तर खोजिरहेको थिए। आफ्ना अनेकौ प्रस्न हरुका बिच कसैले मलाइ सोध्यो डिप्रेसन भनेको के हो ? । अ साची डिप्रेसन भनेको के हो ?
बाहिर हेर्दा जे देखिन्छ, त्यो बास्तविकता होइन सबैलाई सबै खुसि मिल्दैन ,सबै कुराले पूर्ण भएको मानिसलाई पनि केहि न केहि अभाब खड्किरहेको हुन्छ। स्कुल देखि कलेज सम्म संगै दिन बिताएका साथिहरु, कामको शिलशिलामा भेटिएका कयौ साथीहरु, फेसबुकमा भएका हजारौ साथीहरु सायदै कसैले पनि बुझ्न सक्दैन् कि मनमा के कुरा खेलिरहेको छ। यहाँ हरेक मानिस पिडामा छ तर पिडा भनेको के हो ? कसैलाई थाहा छ ?
आखिर के चाहन्छ मानिस ?
साची के खोजिरहेको छ ?
के का लागि दौडिरहेको छ ?
के छ त्यस्तो र आफै देखि भागिरहेको छ ?
किन छटपटी अईठन,निराशा , आफुले आफैलाई केहि गर्न नसक्ने लाचार सम्झिरहेको छ ?
दिन बिताउने बहानामा जिन्दगी बित्दै गर्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भैदिन्छ कि अब जिन्दगी यहि नेर ब्रेक लाग्दै छ ,अगाडी बढ्न सक्ने आट हौसला
साथ् अनि माया पहिले नै सकिसकेको आभास गर्छ।
कुनै समय लाग्थ्यो जिन्दगीलाई राम्ररी बुजेको छु,अनि बुझेका छन् सबैले मलाइ ,हो यहि नै तालमेल मिलेन बुझेको छु र बुझेका छन् भन्ने कुरामा , जिन्दगीको यात्रामा हिन्दै गर्दा कहाँ कति बेला को संग ठोकिन पुगिन्छ पत्तै नहुने .
बढ्दो उमेर संगै शरीरमा उत्पन्न हुने विभिन्न हार्मोनहरुको कारणले गर्दा बिपरित लिङ्ग प्रति आकर्षित हुनु स्वभाबिक नै हो , यतिकैमा कहाँ कति बेला को संग सम्बन्धमा गासिन पुग्छन पत्तै हुदैन ,
सम्बन्ध भनेको केहो ?
हामी कस्तो खालको सम्बन्ध जोड्न खोजिरहेका छौ ?
के हामि त्यो सम्बन्ध बाट खुसि छौ ?
यस्तै थुप्रै प्रस्नहरुको उत्तर खोज्न बिर्सिएका हुन्छौ।
र क्षणिक आवेगमा आएर कसै संग सम्बन्धमा गासिन पुग्छ।
जब कसै संग सम्बन्धमा जोडिएका हुन्छौ तब लाग्छ अब म संग सबै कुराहरु छ , सबै अभाब मेटिएको छ।
दिनहरु बित्दै जादा एकअर्का प्रति नजिक भैसकेका हुन्छन , अझै आजकल त धेरै सजिलो बनेको छ किनकि प्रविधिको भरपुर सदुपयोग
भैरहेको छ। न बनोस पनि त कसरि सारा दुनिया एउटा हातमा घुमेको छ।
दिन हरु बित्त्दै जादा , पलपलको जानकारी दिनु पर्ने आफ्नो काम होस् या न होस् ,ब्यस्त छ या छैन , जे भएपनि उ सग एकछिन कुरा गर्न पर्छ। हुन पनि हो आफ्नो मान्छे कहाँ के गर्दै छ बुझिराखेको राम्रो तर त्यहि बुझाई कहिले कहिँ भारि भैन्दिन्छ , जब बुझाइ शंकामा रुपान्तरण हुन्छ नि तब सम्बन्धले रुप परिबर्तन गर्न थाल्दछ।
लाग्छ सम्बन्ध भनेको संबेदनशिल हुन्छ -सामाजिक ,पारिवारिक आर्थिक अनि सबैले भोगिरहेको जात ,धर्मले पनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ। सम्बन्ध जोडीदा जात,धर्म, वर्ग। धनि गरिब केहि पनि हेरिदैन ,”हेरिन्छ त केवल बाहिरि आवरण जुन अहिले बजारमा राम्रै बिकिरहेको छ । दिन हरु बित्दै जान्छन एक अर्काको आवश्यकता पुरा हुदै जान्छन अनि बिस्तारै चिसिदै जान्छ सम्बन्ध पनि
त्यसपछि मनमा अनेक छटपटी सुरु हुन्छ , अनि डिप्रेसनको शिकार हुन पुग्छन किन बढिरहेको छ युवा पुस्तामा डिप्रेसनको शिकार आखिर के चाहन्छन ?……………………….